Qaar kamid ah Soo Galootiga Muslimiinta ah ee Jarmalka oo Gaaloobay – Radio Daljir
Seteembar 7, 2015 5:21 b 0
Isniin, September 07, 2015 (Daljir) — Dad tiradooda lagu sheegay boqolaal oo kasoo kala jeeda dalalka Iraan iyo Afghanistan ayaa la sheegay inay ka baxeen diinta Islaamka.Dadkan oo laga magac dhabay lamaane 5 bilood ka hor kasoo qaxay dalka Iraan ayaa la sheegay inay galeen kaniisad ku taala magaalada Berlin kadibna ay halkaa ku iclaamiyeen inay ka baxeen diinta islaamka.
Dadka la sheegay inay gaaloobeen waxaa kamid ah Maxamed Cali Zanoobi iyo xaaskiisa Afsaneh,lamaanahan ayaa hada qaatay magacyada Martin iyo Katrina.
Qaxootigan la sheegay inay gaaloobeen ma aha qaxootiga cusub ee hada kasoo qaxay dalka suuriyaa ee waa dad horay uga soo qaxay dalalka Iraan iyo Afghanistan oo mudooyin kala duwan sharci la’aan ku ahaa dalka Germany.
Baadarigii labadan lamaane kusoo dhaweeyay gaalnimada ayaa sheegay inay jirto sababo dadkan ku qasbaya inay gaaloobaan waxaana sababahaas laga sheegay sidii ay sharci uga heli lahaayeen dalka Germany.Baadarigu wuxuu sheegay in asbaabtu aysan muhiim ahayn ayna kusoo dhaweynayaan diinta masiixiga.
Walaaca jira ayaa ah in warkani ku soo beegmay xili kumanaan qaxooti ah oo kasoo qaxay dalka suuriya lagu soo dhaweeyay dalka Germany baadariga ugu weyn kaniisada kadooligana uu ku baaqay in masiixiyiintu qooys uqaybsadaan qaxootiga cusub.